Faah Faahin Kasoo Baxeysa Muwaadin Soomaaliyeed Oo Lagu Dilay Koonfur Afrika | dayniiile.com
Home WARKII Faah Faahin Kasoo Baxeysa Muwaadin Soomaaliyeed Oo Lagu Dilay Koonfur Afrika
Koox burcad Koonfur Afrikaan ah ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxaa ay Xaafad ka tirsan Magaalada Cape-Town ee dalkaas ku dileen Muwaadin Soomaaliyeed oo kamid ahaa Ganacsatada kunool halkaas.
Allaha u naxariistee Muwaadinka la dilay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Muxudiin Macalin Cabdulle Nuur, waxaana dilkiisa uu ka dhacay afaafka hore ee goob ganacsi oo uu ku lahaa Xaafadda krafooniten Magalada Cape-Town.
Mid kamid ah dadka Soomaalida ah ee ku sugan dalka Koonfur Afrika ayaa waxaa uu sheegay in Marxuum Muxudiin Macalin oo kamid ahaa dhalinyarada firfircoon ee kunoolaa Xaafadda krafooniten Magalada Cape-Town, isagoo u dhintay xaddabo qeybaha sare ee jirka looga dhuftay.
Dilka Koonfur Afrika ayaa waxaa mararka qaarkood ka dhaca dilal loo geysto Muwaadiniinta Soomaaliyeed ee goobaha ganacsi ku leh dalkaas, iyadoona sanadkaan 2022 Koonfur Afrika lagu dilay Muwaadiniin dhowr ah oo Soomaali ahaa.
Previous articleDowladda Maraykanka Oo Walaac Darran Ka Muujisay Gabood-Fallada Ka Dhacay Itoobiya
Next articleMidowga Afrika oo sheegay in ay qiimeynayaan tilaabadii lagu eryay Amb Madeira
Weerar ka dhacay duleedka Kismaayo & khasaaro ka dhashay